Macallimiinta Kenya oo ka noqday shaqojoojintii - BBC Somali
Macallimiinta Kenya oo ka noqday shaqojoojintii
17 Luulyo 2013
Image caption Guddoomiyaha ururka macallimiinta Kenya
Go'aankani macallimiinta dusiyada hooe ee dalka Kenya ay kaga noqdeen muddaharaadkii shaqa-joojinta ee ay ku jireen waxa uu ka dabeeyey wasiirka waxbarashada Jacob Kaimenyi oo ku dhawaaqy in la xiro dhammaan iskuullada hoose dhexe ee dalka, muddo aan la cayimin.
Shaqo-joojinta macallimiintu waxay socotey muddo afar toddobaad ah, waxayna dalbanayeen in loo kordhiyo mushaharka boqolkiiba dhawr boqol.
Wasiirka waxbarashada ayaa horey ugu amray macallimiinta inay dib u billabaan shaqadooda, haddii kale inay dhici karto in shaqada laga wada eryo.
Ururka u dooda macallimiinta dalka Kenya ayaa hadda ka hor ku gacanseyray digniinta, waxayna sheegeen inay shaqo joojinta wadayaan ilaa dowladdu ka oggolaanayso dalabkooda, waxayna doonayaan weliba la siiyo gunnooyinka ay kiraha guriyaha iskaga bixiyaan.
Guddomiyaha ururka macallimiinta ee loo yeqaano KNUT, Wilson Sossion, ayaa sheegay in macallimiinta aan loo cagajuglayn karin.
Dowladda ayaa macallimiinta u soo bandhigtay hindiso lacagta loogu kordhinayo, hase ahaatee, macallimiinta ayaa sheegay in aanay gaarsiisnayn heerka ay doonayaan.
Arrintani ayaa saamayn ku yeelatay dhowr milyan oo arday ah oo dhigata iskuullada hoose dhexe iyo in ka badan 240,000 macallin.
Shgaqa-joojintaas iyo ismariwaagani waxay uu dhacay iyadoo dowladdu toddobaadkan 100 maalmood jirsatay.